भर्जिनिया (VA) Cash4Life मंगल, जुलाई N नम्बर (परिणाम) | लटरी.कट
परिणाम > भर्जिनिया > Cash4Life > 07-07-2020
मंगलवार, जुलाई 7, 2020 भर्जिनिया Cash4Life जीत संख्या र परिणामहरू
तपाईं म page्गलबार, जुलाई,, २०२० यस पृष्ठमा भर्जिनिया क्यास L लाइफका लागि विजयी नम्बरहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो लटरी जानकारीको साथ अद्यावधिक रहनको लागि, हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै पछिल्ला २०२० VA Cash2020Life नतीजाहरू हेर्नुहोस्
भर्जिनिया लोटरी खेलहरू
एक मिलियन बैंक :10:०० अपराह्न EST १--6 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST बुधबार र शनिवार
3 रात छान्नुहोस् :10:०० अपराह्न EST १--3 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST दैनिक
4 रात छान्नुहोस् :10:०० अपराह्न EST १--4 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST दैनिक
नगद5दिन :1:०० अपराह्न EST १--5 देखि शीर्ष पुरस्कार :1:०० अपराह्न EST दैनिक
नगद5रात :10:०० अपराह्न EST १--5 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST दैनिक
भर्जिनिया लटरी प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
के मैले अज्ञात रहन सक्छु यदि मैले भर्जिनियामा लटरी जितें भने?
हो, रकममा निर्भर गर्दै! भर्जिनियाको नयाँ कानूनले १० लाख डलर भन्दा बढी पुरस्कार विजेताहरू अज्ञात रहन अनुमति दिनेछ यदि विजेताले लटरीमा लिखित रूपमा आफ्नो नाम र गृहनगर रिलीज गर्न राजी हुँदैन भने। पुरस्कार रकम र टिकट खरीद गरिएको स्टोर जहाँ, सार्वजनिक रेकर्ड हुनेछ। १० मिलियन डलर र कमको पुरस्कारका लागि, विजेताहरू पनि सार्वजनिक रेकर्ड रहनेछन्।
आज VA लॉटरी कति छ?
तपाइँ यहाँ भर्खरको VA लॉटरी ज्याकपॉट रकमहरू तपाइँका सबै मनपर्ने खेलहरूका लागि लोटरी.कटमा पाउन सक्नुहुन्छ भर्जिनिया लटरी ज्याकपट्स पृष्ठ.
मैले भर्जिनियाको लटरी जितें भने मैले करमा कति तिर्ने छु?
कानूनको आधारमा, भर्जिनियाले २ Federal% संघीय करमा र taxes% राज्य करमा lot००० भन्दा बढी सबै लोटरी जितबाट रोक्छ।
के म VA लॉटरी टिकट अनलाइन खरीद गर्न सक्छु?
भर्जिनिया लटरीले मेगा मिलियन्स, पावरबल, र क्याश L लाइफ खेल्न अनलाइन सदस्यता प्रदान गर्दछ।
भर्जिनिया लोटरीको बारेमा
भर्जिनिया लोटरी १ 1987 20 मा शुरू भयो जब भर्जिनियाका मतदाताहरूले राज्यको चिठ्ठा पार गरे। पहिलो टिकट सेप्टेम्बर २०, १ 1988 1.6 मा बेचिएको थियो। यो कर डलरको सट्टा बिक्रीबाट पूर्ण अनुदान हो र भर्जिनियाको युवा शिक्षाको लागि प्रति दिन करीव १10 लाख डलर उत्पन्न गर्दछ। कुलमा, भर्जिनिया लटरीले १ 12 1999। देखि राज्यको K-१२ सार्वजनिक शिक्षाको लागि लगभग १० अरब डलरको नाफा कमाएको छ।
भर्जिनिया लोटरीको बारेमा अधिक जान्न कृपया अधिकारीको भ्रमण गर्नुहोस् वेबसाइट.